Uri wuxuu meel saaray Bahubali 2 hadda wuxuu u socdaa filimka filimada Gadar inuu meel saaro!! – Filimside.net
Uri wuxuu meel saaray Bahubali 2 hadda wuxuu u socdaa filimka filimada Gadar inuu meel saaro!!
Filimka Uri – The Surgical Strike wuxuu todobaadkiisa shanaad sedexda maalmood ugu horeyso keenay 12 Crore (Trade Figure) sidaasna wuxuuba ku dhaafay filimka halyeega ah Bahubali 2 todobaadkiisa shanaad oo dhan lacagaha uu keenay halka Uri tirsi ahaan todobaadkiisa shanaad inuu dhameesto afar maalmood kaga harsan tahay!
Uri waalida uu ku socdo hal cabir ayaa laga bixin karaa oo ah filimka lacagaha ugu badan soo xareeyay ee Bollywood-ka sameeyeen Dangal in todobaadkiisa shanaad sedexda maalmood ugu horeyso keenay 5.75 Crore halka Uri labo laab uu Dangal ka lacag badan yahay isla tirsigaan!
Uri wuxuu jebiyay iskoorada Bahubali 2 u dhigay todobaadyadii 4-aad iyo 5-aad haddana haddana wuxuu u jeestay sidii uu ku jebin lahaa iskoorada todobaadyada lixaad iyo todobaad u yaalo filimka filimada Gadar Ek Prem Katha oo aan waligeed lagu riyoon in iskooradiisa la gaari karo.
Gadar – Ek Prem Katha oo Sunny Deol sameeyay todobaadkiisa lixaad wuxuu keenay 6.09 Crore halka todobaadkiisa todobaad uu keenay 4.95 Crore sanadii 2001 waxaana haatan aad looga cabsi qaba labadan iskoor 18-sano Bollywood-ka u dhawaan waayeen in Vicky Kaushal filimkiisa Uri gaaro ama ka tilaabsado!
Waxba ma harin marba haddii labada filim ee qarnigan 21-aad Hindiya ugu weyn Bahubali 2 iyo Gadar iskooradii ay dhigeen Uri midna cagta mariyay midna kalena uu u socdo!!
Filimka Uri haatan mudo 31-maalmood ah wuxuu soo xareeyay 212 Crore (Trade Figure) sidaasna wuxuu kaga lacag badiyay filimka Blockbuster-ka weyn noqdeen sida Chennai Express (SRK) iyo Kick (Salman Khan). Sidoo kalena Uri wuxuu noqday filimka 11-aad ee lacagaha ugu badan soo xareeyo taariikh ahaan dabcan darajaas ma dhaafi doono madaama ay ku adag tahay filimka xiga dhanka lacagaha Simmba oo 240 Crore soo xareeyay inuu gaaro.
Fadlan hoos kaga
Axad shanaad – 5.25 Crore
Todobaadka shanaad – 12 Crore (mudo 3-maalmood ah)
Wadarta Guud – 212.35 Crore (Trade Figure)
Marka ma gadar aya hindiya ugu sareeya yacni lacag so xaraynta saw maha